Shariif Xasan oo weji gabax kala kulmay xildhibaano uu u diray Xasan |
Shariif Xasan oo weji gabax kala kulmay xildhibaano uu u diray Xasan
Muqdisho (Somalimedia.co.uk)- Shariif Xasan Sheikh Aadan, Madaxweynaha maamulka koofur Galbeed ayaa wajigabax weyn kala kulmay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, oo uu u diray madaxweyne Xasan Sheekh.
Shariif Xasan, ayaa waday olole xildhibaanada mucaaradsan xukuumada cusub looga dhaadhicinayo inay ka laabtaan mucaaradnimadooda, islamarkaana ay ogolaadaan qaar ka mid ah xubnaha ay u diidan yihiin wasiirnimada.
Xogta Caasimada Online ay helayso ayaa sheegaya in Shariif Xasan Sheikh Aadan uu tagay Hotelada Muqdisho qaarkood oo ay ku shirayeen xildhibaano baarlamaanka ka tirsan kuwaasi oo diidannaa golaha wasiirada cusub, ee la kala diray.
Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa u sheegay Caasimada Online, in Shariif Xasan, uu watay dhaqaalo badan uuna doonayay inuu laaluush dhaqaale uu siiyo xildhibaanada mucaaradka ah.
Waxaa la sheegay inay arintaasi ka diideen xildhibaanada oo qaarkood iska waayay liiska golaha wasiirada cusub ee Soommaaliya, halka qaarkoodna ay diidanaayeen siyaasiyiin horey siyaasada ugu fashilmay.
Arinta mucaaradnimada xildhibaanada ayaa sababtay in la kala diro xukuumada Soomaaliya oo shalay lagu waday in baarlamaanka la horgeeyo.